रविना वादीकाे यस्तो अडियो बाहिरियो, जस्लार्इ सुनेपछि यस्तो भन्न मन लागेपछि … हेर्नुस र सुन्नुस पनि! – PathivaraOnline
Home > समाज > रविना वादीकाे यस्तो अडियो बाहिरियो, जस्लार्इ सुनेपछि यस्तो भन्न मन लागेपछि … हेर्नुस र सुन्नुस पनि!
रविना वादीकाे यस्तो अडियो बाहिरियो, जस्लार्इ सुनेपछि यस्तो भन्न मन लागेपछि … हेर्नुस र सुन्नुस पनि!
admin September 25, 2018 समाज 0
रबिना बहिनी तिम्रो न्युजहरु हेर्दै आए दया पनि लाग्यो।सहयोग मैले गर्न सकिन तर पनि तिम्रो सबै न्युजहरुसंग परिचित थिए।तिमीले गाएका गितहरु पनि मन पर्यो।तिम्रो वेदनामा आशु पनि झारे ।तर अस्तिको तिम्रो अभद्र व्यवहारले मलाई सोच्न बाध्य गरायौ त्यति धेरै यातना सहेकी रबिनामा अचानक यो बदलाब कसरी आयो ।आफु गायिका भए भनेर हो या अब पुरै दुनिया आफ्नो साथमा छन भन्ने घमण्ड ।
एकमनले सोच्यो आक्रोशमा आयौ पतिको पहिलेको व्यवहारको पिडा एकैचोटी ज्वाला बनेर बिस्फोट भयो होला ।तबसम्म पनि तिमीलाई गलत मानिन कताकता लाग्यो तिम्रो श्रिमानको कुरामा पनि सत्यता हुनसक्छ ।मैले चुपचाप नियालिरहे तर आज अचानक यो अडियोलाई हेर्दा मन बाध्न सकिन मलाई भन्न मन लाग्यो रबिना पुर्णरुपमा सही छ जस्तो मलाई लागेन।
पुष्पा चन्द बिरामी मान्छे हेलो भन्ने अवस्था छैन नसकी नसकी बोल्दै छिन बिचतिरै विस्तारै आवाजमा परिवर्तन आउछ आवाज ठुलो हुन्छ मानौ बिरामीपन हटिसक्यो ।
चिनजान थिएन Request Accept पनि गरेको थिइन तर नम्बर फेसबुकबाट थुतेर कल गर्या रे । नाम के भन्थ्यो रबिनालाई थाह छ बिचरीलाई plan मा नाम बताउन भुलेछन या नाम सोच्ने फुर्सद भएन । श्यामलाई गलत साबित गर्ने योजना मा तयारी पुगेन अलि योग्य कलाकार खोज्नुपर्ने जो नौटंकी होस । होइन आफ्नो personal नम्बर कसले पब्लिक गर्छ कि दुनिया भरकोले थुतेर फोन गर्न मिल्ने अलिकति common sense त हुनुपर्छ।
आखिर कति मिडियालाई पागल बनाउछौ , हासिल के गर्न खोज्दै छौ तिमीहरु ? रबिना तिमीसंग उ बिरुद्द बोल्ने केटीहरु उसका गर्लफ्रेन्ड थिए भने आफु नकारात्मक बनेपछी मात्र किन सार्वजनिक गर्यौ ? रबिना तिमी सही छौ होला तर यो अडियोलाई म सही मान्दिन। नारी देवि हुन पुज्नुपर्छ तर सबैको आखामा छारो हालेर अर्काको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउने नारीको म कदापी सम्मान गर्न सक्दिन।
तिम्रो समस्या छिट्टै समाधान होस रबिना बहिनी फेसबुकमा रोग बनिरहेका तिम्रो केसका स्टाटस अब छिट्टै बन्द हुन। मबाट केही भुल भए माफी चाहन्छु सबैको ध्यानाकर्षणको लागी पोस्ट गरेकी हु। यो अडियोलाई गहिरिएर सुन्नुहोला कसैको पक्षमा नसोची सुन्नु अडियो सही हो या गलत आफै बुझ्नुहुनेछ ।
अडियो भिडियो सुन्नुहाेसः
निर्मला हत्याकाण्डः ‘गोली नचलाउनु’ भन्दाभन्दै कसरी चल्यो गोली ? हेर्नुहोस पुरा समाचार
शिल्पा र छबि काण्डको वास्तविकता यस्तो! को हुन शिल्पाका पुर्वपति र छविराजका चार श्रीमति
सु’हा’ग’रा’त’मा शा’रीरि’क सम्बन्धकै क्रममा १८ वर्षकी बेहुलीको मृ’त्यु